Articles tagged 'zimbabwe a'
Zim A complete series whitewash 20 May 2017 HARARE - Hamilton Masakadza scored a century to help Zimbabwe A beat Canada by 70 runs during the third and final one-day game yesterday to secure a 3-0 series whitewash. Zimbabwe A had won the other two matches by two wickets and 78 run respectively against the Associate nation. Yesterday,...
Zim A out to seal series 18 May 2017 HARARE - Zimbabwe A will be looking for a more clinical batting performance when they take on Canada in the second one-day game at Harare Sports Club today. The hosts will win the three-match series if they triumph in today's match after having secured a two-wicket victory in the first match o...
Afghanistan seal series win 1 February 2017 HARARE - Afghanistan gunned down hosts Zimbabwe A by 22 runs in the third unofficial ODI to wrap up the series with an unassailable 3-0 lead in the five-match series yesterday. The visitors' 21-year-old seamer Nawaz Khan was the star of the show as he grabbed three wickets in the last over for...
Afghanistan sound warning to Zim 31 January 2017 HARARE - Afghanistan have warned of the danger that lies ahead for the Zimbabwe senior cricket team after their development side went 2-0 up in the ongoing limited overs series at Harare Sports Club. The Asian side's A team moved within a match to wrap up the five-match limited overs series wi...
South Africa A proved too good 21 July 2016 HARARE - South Africa A were visibly disappointed after Zimbabwe's plucky second innings display which saw the hosts cling on for a draw, and Stephen Cook and his men made it clear that there would be only one winner in the second game at Queens Sports Club in Bulawayo. From the onset, the vis...
Zim A suffers innings defeat 19 July 2016 HARARE - Zimbabwe A went down to South African A by an innings and 81 runs at Bulawayo's Queens Sports Club yesterday to give the visitors a 1-0 series win after drawing the first unofficial Test match in Harare. The locals were dismissed for a measly 133 all out inside 56 overs for their seco...
Life goes on - Vusi Sibanda 13 January 2015 HARARE - After a disappointing week in week he was left out of Zimbabwe's 2015 Cricket World Cup squad, Vusi Sibanda answered critics the best way he knows how by scoring runs. The 31-year-old was in outstanding form as he scored a blistering 99 off 101 to help Zimbabwe A beat Canada by seven ...
Utseya rescues Zimbabwe A 9 January 2015 HARARE – Bowler Prosper Utseya snatched a victory from the jaws of defeat for Zimbabwe A against Canada yesterday with a clinical 46-ball 36 runs as the hosts won by one wicket with four balls remaining here yesterday. Canada batted first and were restricted to 170-9 in 50 overs while Zimbabwe...
Canada or Asian Select? 7 January 2015 HARARE - Just one player born in Canada featured in the team's 111-run defeat to Zimbabwe A yesterday to further raise question marks over the eligibility debate that reoccurs frequently in international sport. 25-year-old batsman Usman Lambada was the only locally-based player in the eleven t...
Zim selectors face headaches 26 September 2014 HARARE - Zimbabwe A are currently doing battle in Bangladesh, and as expected, it has been one way traffic with the Bangladeshi spinners dictating terms. The worrying aspect is that up to now, only three players have shown any sort of backbone in what has been an absolute nightmare tour for ou...
Bangladesh A leave Zim reeling 24 September 2014 HARARE - Vusi Sibanda took five wickets with his part-time medium pace but Zimbabwe A ended day two of their second unofficial Test with Bangladesh reeling on 91-6, still 167 runs behind. Bangladesh A totalled 258 runs at Fatullah after being asked to bat first. They scored 88 runs for no loss...
Zim A stare down at defeat 17 September 2014 HARARE - Saqlain Sajib returned to haunt Zimbabwe A again after his six wickets in the tourists’ second innings on the third day of the first unofficial Test left them on the brink of defeat. Zimbabwe A were dismissed for 108 in the coastal town of Cox’s Bazar, capitulating once again to Sajib...
Tricky assignment for Zim A 10 September 2014 HARARE - Touring Bangladesh is never easy at the best of times. The hot and humid conditions, the worry of contracting one of the many stomach bugs, the unwavering stench of the various human bodily functions, and the low and slow wickets, tailor made for the Bangladeshi spinners, who for year...
Zim A level series 4 August 2014 HARARE - Zimbabwe yesterday beat Afghanistan by eight wickets at Country Club to draw the two-match unofficial Test series one all. Playing under the Zimbabwe A banner, the hosts restricted Afghanistan to 169 in the first innings with seamers Cuthbert Musoko and Neville Madziva taking three wi...
Zim A bowlers on fire 4 August 2014 HARARE - Zimbabwe A's seamers dismissed Afghanistan A for 169 on the first day of the second four-day match in Harare. Cuthbert Musoko ran through the top order and Tatenda Mupunga and Neville Madziva took over from there as Afghanistan A lasted 54.1 overs after choosing to bat. Musoko redu...
Zim A tour rare dose of good news 5 June 2014 HARARE - For almost four years, the Zimbabwe A side has become a bit of a white elephant so to speak, what with the national team and all it's coverage both on and off the field. Player strikes, mudslinging and the occasional win have dominated our headlines and general conversations, and our ...
Opportunity knocks for fringe players 4 June 2014 HARARE - Zimbabwe A’s tour to Bangladesh provides an ideal platform for fringe national team players, domestic cricket’s best performers and Under-19 graduates to stake claims for places in the full national side – says chief selector Givemore Makoni. Zimbabwe Cricket last week named a 15-man ...
Chawaguta new Zim A coach 26 May 2014 HARARE - Zimbabwe Cricket has confirmed the Zim A tour of Bangladesh and also appointed Walter Chawaguta as the developmental side’s new coach. Chawaguta takes charge of the team for the month-long tour of the Subcontinent that is expected to start on July 1. The former Zimbabwe national te...
Zim A to tour Bangladesh 18 April 2014 HARARE - The country’s second-string cricket team, Zimbabwe A, is set to tour Bangladesh in June, a an official from the Asian country has said. Bangladesh Cricket Board (BCB) cricket operations chairman Akram Khan revealed the impending tour while reviewing the Tigers’ performance during las...